အာဏာရှင်၏ နိုင်ငံရေးအင်အားကို ချည့်နဲ့စေခြင်းက အကြမ်းမဖက် လူထုလှုပ်ရှားမှု၏ အစွမ်းထက်ဆုံး လက်နက်တခု ဖြစ်သည်ဆိုသော အယူအဆ – Institute for Strategy and Policy – Myanmar
အလေးထားရမည့် အကြောင်းအချက်များ အမှတ် – (၁၁)
စစ်အာဏာရှင် စနစ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကို အံတုဖြိုချဖို့ လုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါ အကြမ်းမဖက်တဲ့ ပြည်သူတွေဘက်မှာ ဘယ်လို စွမ်းရည်မျိုးတွေ၊ လက်နက်မျိုးတွေ ရှိဖို့လိုမလဲ။ ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ Gene Sharp ကတော့ နိုင်ငံရေးအင်အားကိုပဲ အားကိုးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူက ရွေးကောက်ထားတဲ့ အစိုးရတွေကို ဖယ်ရှား ထိန်းသိမ်းပြီး ရာဇပလ္လင်ပေါ်ကို အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ထိုင် လိုက်နိုင်တာနဲ့ အာဏာရှင်တွေဟာ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ ထိန်းချုပ်ခွင့် ရသွားကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာသိမ်းယူမှု အထမြောက်ဖို့ ဆိုရာမှာ အာဏာသိမ်း အဖွဲ့အစည်းဟာ အစိုးရ ယန္တရားကို အုပ်စီးမိနိုင်ဖို့ လိုသလို၊ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ လူမှု စီးပွားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဩဇာတိက္ကမ ကြီးသူ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ လက်ခံမှုရှိမှ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့် စစ်အာဏာရှင်တွေက လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကူညီထောက်ခံမှု မရှိရင်၊ တခါ “နိုင်ငံရေးအင်အား” မရှိရင် အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရား လည်ပတ်ဖို့ ခက်ခဲ စေနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရှင်တွေ နိုင်ငံရေးအင်အား ရှိ မရှိ ဆိုခြင်းအပေါ် Gene Sharp ပြောတဲ့ အခါ အာဏာဒေါက်တိုင် ခြောက်ချောင်း အပေါ်မူတည်တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
(၁) အာဏာကိုင်စွဲ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိခြင်း – လူထုက အာဏာရှင် အဖွဲ့အစည်းဟာ တရားဝင် ဖြစ်တယ်၊ ဒါ့ကြောင့် အာဏာရှင်တွေ ချမှတ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ၊ ဥပဒေတွေနဲ့အညီ နေထိုင်မယ်လို့ လက်ခံလိုက်ခြင်း၊
(၂) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် လုံလောက်စွာရှိခြင်း – အာဏာရှင်စနစ် အောက်မှာ နာခံမယ့်၊ ပူးပေါင်းမယ့်၊ ကူညီမယ့် လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ အင်အား ကောင်းသလား၊ ဩဇာ ရှိကြသလား၊ နာမည်ကောင်းရှိသလား၊
(၃) အာဏာရှင် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အသိပညာနဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိခြင်း – အာဏာရှင် အဖွဲ့အစည်းဟာ နည်းနာ ကြွယ်ဝပြီး လုပ်ငန်းတွေကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ရင်းမြစ်များ လုံလောက်စွာ ရှိခြင်း – သဘာဝ သယံဇာတ၊ ငွေကြေး အရင်းအမြစ်၊ စီးပွားရေးစနစ်၊ ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး စနစ်တွေ အပေါ်မှာ အာဏာရှင်က ဘယ်လောက် ထိန်းချုပ်နိုင်မှု ရှိသလဲ၊
(၅) လူထု ယုံကြည်ချက် ပျက်သွားစေမယ့် အကြောင်းများ – လူထုက အာဏာရှင်ကို ကြောက်ပြီး ယုံကြည်ချက် ပျက်သွားမယ့်၊ ဘက်ပြောင်း သွားစေနိုင်မယ့် အကြောင်းများရှိသလား၊
(၆) ဖိနှိပ်အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း – အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုတွေကို အာဏာရှင်က ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ထိရောက်အောင် ဖိနှိပ် အရေးယူ နိုင်ခြင်းတွေ လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိလား စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေဟာ ဒီဒေါက်တိုင်တွေကို လှဲဖြိုခြင်းအားဖြင့် အာဏာရှင်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားကို ယုတ်လျော့အောင် လုပ်ပြီး အာဏာရှင်တွေရဲ့ အာဏာကိုင်စွဲ ခြယ် လှယ်မှု လက်လွတ် ဆုံးရှုံးအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြမ်းမဖက် လူထု တော်လှန်ရေးတွေမှာ တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံ ဆောင်ရွက်ပုံ နည်းနာတွေ မတူကြပေမယ့် အာဏာရှင်ရဲ့ ဒေါက်တိုင်တွေကို တဖြည်းဖြည်း ဖြိုလှဲတဲ့ နည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အား ဆုတ်ယုတ်စေပြီး အာဏာစွန့်ခွာအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သာဓက အများကြီး ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် အတွင်း တူနီးရှား၊ အီဂျစ်နဲ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အား ကျဆင်းအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ အဆက်မပြတ် ဖိအားပေးခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ လူထုလိုလားတဲ့ ရလဒ်ကို ဖော်ဆောင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေထဲမှာ အာဏာစက် မတည်ဆောက်နိုင်အောင် ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ် မဆင်းတာ၊ အခွန်မပေးတာ၊ အာဏာရှင်တွေနဲ့ မပူးပေါင်းတာ၊ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ၊ ထုတ်ကုန်တွေကို မသုံးစွဲဘဲ သပိတ်မှောက်တာ စသဖြင့် ရသမျှနည်းနဲ့ အာဏာရှင်တွေကို ဆန့်ကျင်တာတွေလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနဲ့ အာဏာ ဒေါက်တိုင် ခြောက်တိုင်ကို ဖြိုလှဲနိုင်ခြင်းအားဖြင့် အာဏာသိမ်း အဖွဲ့အတွင်းက ခေါင်းဆောင်အချို့ဟာ ပြည်သူဘက်ကို ပြောင်းလဲ ရပ်တည်လာတာ၊ နိုင်ငံတကာ ဝင်ရောက် ဖျန်ဖြေမှုတွေရှိလာတာ စတဲ့ အာဏာရှင်တွေ အာဏာ လက်လွှတ်ရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းတရားတွေကို ပေါ်ပေါက်စေအောင် စေ့ဆော် တွန်းအားပေးနိုင်တာကြောင့် အလေးထားသင့်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်စေဖို့ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူတွေ ဘက်မှာ ဘယ်လို စွမ်းရည်မျိုးတွေ ရှိဖို့ လိုမလဲ ဆိုခြင်းအတွက် Gene Sharp ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အာဏာ ဒေါက်တိုင် ခြောက်ချောင်းကို ချည့်နဲ့စေနိုင်မလား ဆိုတာနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး နားလည် နိုင်တာမို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆီလျော်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ ဒေါက်တိုင် ၁ ကနေ ၄ အထိကို မြန်မာပြည်သူ တွေက လုပ်ဆောင်နေပြီး အတန်အသင့် အောင်မြင်နေပါတယ်။
(၁) ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်ကနေ အခုချိန်အထိ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီရဲ့ အာဏာစက် အသက် မဝင်နိုင်အောင် ပြည်သူတွေက တိုက်ပွဲ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ အန်တု ခဲ့ကြပါတယ်။ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှု Civil Disobedient Movement -CDM မှာ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ ပါဝင်ခဲ့ကြတာ၊ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီရဲ့ အမိန့်အရ ဖြစ်လာတဲ့ ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို ကိုယ့်မြို့ ကိုယ်ရွာတွေမှာ အုပ်ချုပ်ခွင့် မပေးခြင်း၊ အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုတာကြောင့် အခွန်မဆောင်တာ၊ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု အခကြေးငွေ မပေးဆောင်တာ စတာတွေကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
(၂) အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီရဲ့ ယန္တရားမှာ ပါဝင်သူတွေဟာ အရည်အချင်းပေါ် မူတည်ပြီး ရွေးချယ် ခန့်အပ်တာထက်၊ အရင် ရွေးကောက်ခံ အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပြဿနာ ရှိခဲ့သူတွေ၊ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကို သစ္စာခံမယ့် သူတွေကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို လက်မခံတဲ့ အနေနဲ့ နာမည် ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားသူ အများစုက အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီရဲ့ ယန္တရားမှာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်း မရှိဘဲ ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ယန္တရားမှာ ပါဝင်နေသူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ သူတို့နဲ့ပတ်သက် ဆက်နွှယ်နေသူတွေအပေါ် နာမည်နဲ့တကွ ဖော်ထုတ်ပြီး လူမှုရေး ပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့် ပါဝင်ခြင်း မရှိဘဲ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေလို ပရော်ဖက်ရှင် နယ်တွေ၊ ပညာရှင်တွေ အပါအဝင် အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေကလည်း လုပ်ငန်းခွင် မဝင်တော့ဘဲ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ပိုင်းမှာ များစွာ ထိခိုက်မှုများရှိပြီး အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရား ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်ဖို့အတွက် အကြပ်အတည်း ကြုံစေခဲ့ပါတယ်။
(၃) ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို အင်အားသုံး အကြမ်းဖက် ဖိနှိပ်ဖြိုခွင်းမှုတွေ လုပ်နေချိန်မှာ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ သူတို့ကို ထောက်ခံသူတွေ၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သူတွေရဲ့ လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်မှုနဲ့ အသိပညာကြွယ်ဝမှု အားနည်းတာတွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရ ယန္တရား အမှန်တကယ် လည်ပတ်ဖို့ လိုလာတဲ့ အချိန် မှာတော့ ကျွမ်းကျင်မှု မျိုးလည်းမရှိ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေကလည်း မပူးပေါင်းတော့တဲ့ အခါ ဒုက္ခတွေ့စေမှာ ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အား ချည့်နဲ့မှုအပေါ် သက်ရောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တွေလိုမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေကို မလည်ပတ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လည်း ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ၊ ရင်းမြစ်တွေအပေါ် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက မထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ပြည်သူတွေဘက်က ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။
အာဏာဒေါက်တိုင် ၅ နှင့် ၆ တို့မှာ ဖော်ပြထားသလို သူတို့အပေါ် ထောက်ခံလာအောင် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံနဲ့ ဆောင်ရွက်လာသလို၊ သူတို့ ပြောတဲ့အတိုင်း မနေရင် ပြင်းထန်တဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ခြင်း အားဖြင့်လည်း သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အာဏာစက်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုလည်း စစ်ကောင်စီက အားထုတ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော် သူတွေကို အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းတာ၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေက အကြမ်းဖက်မှုတွေ လုပ်လာတယ် ဆိုပြီး လူအများစုရဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေအပေါ် ပုံဖျက်ဖို့ ကြိုးစားလာတာ၊ ည အချိန်မတော် လူခြေတိတ်ချိန်မှာ ရပ်ရွာတွေထဲ လက်နက်တွေနဲ့ ဝင်ရောက်ပြီး အသံဗုံးတွေ ဖောက်တာ၊ ညစ်ညမ်းစွာ ဆဲရေး တိုင်းထွာပြီး သေနတ်တွေနဲ့ အဆက်မပြတ် ပစ်ခတ် ခြောက်လှန့်တာ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ (စတိုးဆိုင်၊ ယာဉ်၊ အစားအသောက် စသဖြင့်) ကို ဖျက်ဆီး ယူဆောင်တာတွေ လုပ်ပြီး ပြည်သူတွေ ကြောက်စိတ် ဖြစ်အောင် ဖန်တီးယူရင်း စစ်ကောင်စီကို လက်ခံလာအောင် ကြိုးပမ်းတာတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြမှု နောက်ကွယ်မှာ NLD ပါတီ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို ကိုင်စွဲပြီး လူထုယုံကြည်မှု ပျက်ပြားစေဖို့ ရွေးကောက်ခံ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကို ဂုဏ်သိက္ခာ ထိပါးစေမယ့် ဥပဒေပုဒ်မတွေရဲ့ တရားစွဲဆိုတာ၊ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီရဲ့ တရားဝင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ CDM မှာ ပါဝင်သူတွေ၊ ထောက်ခံ အားပေးသူတွေကို ၀ရမ်းထုတ်တာ၊ နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်ဖျက် ပုန်ကန်မှုလို ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်မှုတွေ တပ်ဖို့ အရေးယူဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြတာ တွေကလည်း အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အာဏာကို စုစည်းဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အချက်အဖြစ် သတိချပ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်စေဖို့အတွက် အာဏာ ဒေါက်တိုင် ၁ ကနေ ၄ အထိက အရေးကြီးသလို ဒေါက်တိုင် ၅ နဲ့ ၆ တို့ကြောင့်လည်း အာဏာရှင်တွေရဲ့ အကြောက်တရားသွင်း ဖိနှိပ်ခြင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အား ပြန်လည် တည်ဆောက်နေမှု စက်ကွင်းထဲ ဝင်သွား တတ်တာကို သတိပြုရပါမယ်။
အုပ်ချုပ်ခံ ဒါမှမဟုတ် အုပ်ချုပ်စရာ လူထု မရှိရင် အာဏာသိမ်း လိုက်ရုံနဲ့ အာဏာတည်တာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အာဏာရှင်တွေ အနှေးနဲ့အမြန် အာဏာစွန့်ခွာဖို့ ဆိုရင် လူထုရဲ့ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုဟာ အစွမ်းထက်ဆုံး လက်နက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အာဏာရှင်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အား ယုတ်လျော့ အောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံပညာရှင် Gene Sharp ပြောတဲ့ အာဏာ ဒေါက်တိုင် ခြောက် ချောင်းလုံးကို ဖြိုချနိုင်ရေးကလည်း လေ့လာသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတခု ဖြစ်ပါတယ်။
Gene, S. 2010. From Dictatorship to Democracy. A Conceptual Framework for Liberation. The Albert Einstein Institution. The United States.
Chenoweth, E., & Stephan, M. J. 2014. Drop your weapons: When and why civil resistance works. Foreign Affair, 93, 94.